Shwe Likes – Page 20 – Daily Special News
တပါးသူ လှူပြီးသား သင်္ကန်းကို ၀ယ်ယူပြီးပြန်လှူမိလျှင် ငရဲကြီးပါသလား
Shwe | February 26, 2020
သူ များ လှူပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပြီးပြန် ၀ယ်လှူလျှင် ကုသိုလ်မရဘူးလား…. မင်္ဂင်္လာပါ ဦးဇင်း။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဥပမာ ပြောရ ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကင်္န်းတွေပေါများနေလို့ တပည့်တော်မက အသစ်တခု မဝယ်တော့ပဲ အဲသင်္ကန်းကိုပဲ ဘုန်းကြီးစီ
ချစ်စွဲ လည်း မစွဲ နဲ့… မုန်းစွဲ လည်း မစွဲ နဲ့
အ မုန်း စွဲ အချ စ်စွဲ တခါတလေ မုန်းစိတ် ဝင်နေတဲ့အခါ အဲဒီ မုန်းစိတ်ဟာ မုန်းစွဲအဖြစ် စွဲနေတတ် သလို တခါတလေ ချစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့အခါ အဲဒီ ချစ်စိတ်ဟာ ချစ်စွဲအဖြစ် စွဲနေတတ်ပါတယ်။ အမုန်းစွဲကြောင့် စွဲလန်းတဲ့သူကို ဒေါသတွေပွားရတတ်သလို ဒုက္ခတွေလည်းများရတတ်ပါတယ်။ အချစ်စွဲကြောင့် စွဲလန်းတဲ့သူကို လောဘတွေပွားရတတ်သလို သောကတွေလည်းများရတတ်ပါတယ်။ အမုန်းတွေစွဲရင်
နွမ်း ပါးသူ၊ ကျန်း မာရေး မကောင်းသူ တို့ လုပ်နိုင်သော ကုသိုလ်
အရှင် ဘုရား… ဆင်း ရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်သူများ ၊ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲ ဘုရား-? အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ… ပုည ကြိယ ဝတ္တုဆယ်မျိုး ကောင်းသောအကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး
သိပ်ကောင်း တဲ့ idea လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် . .
Shwe | February 25, 2020
အရင်းနှီး ကိစ္စ မတင်ပြခင်။ ပြောပြသင့်သည့် တစ်ခုရှိပါတယ်။ စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ်က ကျောင်းဆရာမဖြစ်သူ။ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig) ဟာကျောင်းသား/သူတွေကိုစိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပြုလုပ်လိုက်သည်။ ကျောင်းသား/သူတွေကိုအသင်း (၁၄) သင်းဖွဲ့လိုက်သည်။ အသင်း (၁)သင်းစီကိုစာအိတ် (၁)အိတ်စီ ပေးသည်။ စာအိပ်ထဲမှာငွေ (၅)ဒေါ်လာ ထည့်ထားသည်။(မြန်မာငွေ ကျပ်= ၆၅၀၀ ၀န်းကျင်)ငွေ(၅)ဒေါ်လာထဲနှင့် ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကိုယ် သုံးပြီး။
ကေ လးမွေး ထားပြီးပေမယ့် အပျိုတုန်းက ထက်တောင် ပိုလှလာတဲ့ မြန်မာမင်းသမီးများ
ကလေး တစ်ယောက်ကို ဂရုတစိုက် နဲ့ သေသေချာချာ ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ကူဖော်လောင်ဖက်တွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ မိခင်ရယ် လို့ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်သားသမီး ကို ကိုယ်တိုင် အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ စီးပွားလည်းရှာ၊ ကလေးလည်းထိန်းရတဲ့ မိခင်တွေအနေနဲ့ အပျိုတုန်း ကလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သိပ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှဆိုတဲ့
တရားလို ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ က Fair မဖြစ်လို့ ကျွန်တော် ဝင်ပါရတာပါ ဆိုတဲ့ စင်ရော်မောင်မောင်
မဆင့်ရဲ့ အမှုမှာ သူ့အတွက်လည်း အရမ်းစိတ်မကောင်းသလို၊ သားဖြစ်သူကိုလည်း အရမ်းချစ်လို့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ မေသန်းနု ကို တရားလို ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ဟာ ရန်ကင်းတရားရုံးမှာ ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ တရားစွဲ ဆိုထားရုံသာမက ၊ နောက်တိုး တရားခံအဖြစ် သင်္ဃန်းကျွန်းတရားရုံးမှာပါ တရားစွဲဆိုထားတ ယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇနီးဟောင်းဖြစ်သူ မေသန်းနုရင်ဆိုင်နေရတဲ့
သစ် ခုတ်ပြီး တင်လာတဲ့ ကားတ စ်စီးမြင်ပြီး ခိုင်မာတဲ့သံန္နိဋ္ဌာန်တစ်ခု ကို ချမှတ်လိုက် တဲ့နေထူးနိုင်
ပ ရိသတ်ေ တွရဲ့အချ စ်တော်မင်းသားေ ချာနေထူးနိုင်ကတော့ မတူညီတဲ့ဇာတ် ရုပ်တွေနဲ့ အမျိုးမျိုးသောဇာတ် ကားတွေကို ရိုက်ကူးထားပြီး ပရိသတ်ရဲ့အချစ် ကိုသိမ်းပိုက် ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဗွီဒီယိုဇာတ် ကားပေါင်းများစွာကိုရို က်ကူးထားပြီး သူကျင်လည်ရာ ဗွီဒီယိုေ လာကကြီးမပျက်စီးေ စရေးအတွက်လည်း အင်တို က်အားတိုက်လုပ်ဆော င်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပြီး ဝါသနာရှင်သရုပ်ဆောင်ေ လးတွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေး ဖို့ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။
သင့် ရဲ့ နာမည်စာလုံး မှာ ”K” ပါခဲ့သော်
သင့် ရဲ့ နာမည် မှာ ”K” ပါခဲ့သော် … ရယ်လိုက်ရင် အသေချစ်ဖို့ကောင်းတာ 9++ (နာမည်မှာ ”K” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက လျို့ဝှက်လက်နက် တစ်ခုပဲ) လူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတတ်တဲ့စိတ်က မွေးရာပါပဲ …။ (အဲ့ဒီ အားနည်းချက်ကိုမှ အသုံးချသွားတဲ့သူတွေက ရှိတတ်သေး) သဘောထားကြီးပြီး ခွင့်လွှတ် လွယ်တတ်တယ် …။
မင်းသားချောလေး အလင်းရောင် နဲ့ အတူတွဲကာ ပွဲတက်လာတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
တစ်ေ ခတ် တစ်ခါက အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းေ တာက်အောင်မြ င်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲ မှာတော့ မင်းသမီးချော ထက်ထက် မိုးဦးက ထိပ်ဆုံးကနေ ပါဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြော်ငြာ ဘုရင်မလို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ ထက်ထက်က သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအ ရာလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကိုသိမ်း ပိုက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထက်ထက်က ယနေ့အချိ
လူနာတင်ယာဉ် ခိုးယူမောင်းနှင် ထွက်ပြေးသူကို ဖမ်းမိ
ပေါက်ခေါင်း မြို့နယ်တွင် လူနာတင်ယာဉ် ကို ခိုးယူမောင်းနှင် ထွက်ပြေးသွားသူကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ယနေ့ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းေ ဒသကြီးပေါက်ခေါင်းမြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေး ရုံ၌ မြို့နယ်ကုသရေး ဦးစီးမှူး
Newer 1 … 18 19 20 21 22 … 99 Older